Qabri-Bayax, 26 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Dadka buuraha dhaadheer iyo dhulka cidlada ah naftooda ku soo maaweeliya ayaa kharashka kaga baxaya maaweeladaa waxaa u sii dheer khasaaraha ay la kulmayaan dadkaasi. Dalka Nepal ayaa todobaadkan hoos u dhigay qiimaha loogu bixi karo buurta aduunka ugu dheer ee Everest oo markii hore ahayd 25000 qofkii, laakiin hadda ah 11,000 qofkii.
Dad badan ayaa doorbida inay wadamadooda ku qaataan tahriibtaa dhibteeda leh. Waxaa ka mid ah dadkaa Aron Ralston oo 2003 aaday buuraha ku yaala gobolka Utah ee dalka Maraykanka. Aron oo markaa 28 jir ahaa ma jirin cid ogeyd safarkiisa. Maalintaa Aron wuxuu doortay inuu u daadego tog hoose oo 65 feet hoos u qodan.
Nasiib darro markii uu gaadhay halkii u hooseysay ayaa dhagax weyn ka daba yimi wuxuuna kaga dhacay gacanta, Aron wuxuu isku deyey inuu gacantiisa la soo baxo laakiin uma suura gelin. Sadex maalmood ayuu ku mashquulsanaa siduu gacantiisa ula soo bixi lahaa. Wuxuuna si tartiib ah u cabayey 2 litir oo biyo ah oo uu sitey.
Maalintii afraad ayuu isu diyaariyey dhimasho isagoo magaciisa iyo dhalashadiisa ku qoray dhagaxii. Wuu rumaysan waayey markii waagii u beryey maalintii shanaad, markaas ayuu qaatay go'aanka ah inuu gacantiisa jaro si uu badbaadiyo naftiisa. wuxuu sheegay inuu u isticmaalay goynta gacantiisa mindi iyo qalabka wax lagu furo ee bayteriga ku shaqeeya.
Saacad ayay ku qaadatay Aron inuu gacantiisa gooyo, laakiin waxaa sugayey inuu 65 feet ka soo baxo isagoo gacan keliya ah. Wuxuu sheegay inuu ka welwelayey dhiig bax iyo gaadhigiisa oo 13 mayl ka fogaa. Nasiib wanaag wuxuu la kulmay qoys iyaguna buuraha u soo temeshle tegey, qoyskaa ayaa u wacay gargaarka degdega ah. Aron oo dhibtaasi ku dhacday weli ma joojin inuu buuraha gacan keli ah ugu baxo, laakiin hadda dad ayuu kaxaystaa si loo caawiyo hadii dhib timaado. Arintaa ku dhacday Aron ayaa laga sameeyey filinka la yiraahdo 127 hours.